aajnepal – Page 35 –acomplete aaj nepal nepal
करेन्टबाट दुबै हात गुमाएकी मेघा, खुट्टाले लेख्छिन् जिब्रोले मोबाइल चलाउछिन्
February 8, 2019 aajnepal 0
एलिना घिसिङ , काठमाडौँ । विराटनगरकी २१ वर्षीया मेघा घिमिरेका दुबै हात बिजुलीको करेन्टले लग्यो । करेन्टले हात लगेपछि उनको श्रीमान टाढिए । मेघाले भागि विवाह गरेकी थिइन् ।फेसबुकबाट प्रेम बसेपछि उनीहरुले विवाह गरेको मेघाले […]
बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्न नहुने ५ काम ,जसलाइ अशुभ मानिन्छ
February 7, 2019 aajnepal 0
मानिसहरुले बिहानैको राम्रो साइत परे दिनभर राम्रो हुने विश्वास मान्छन् । त्यसैले बिहानको साइतले उक्त दिनको नजिता आउने विश्वास गरिन्छ त्यसैले धेरैले विहानको सयमलाई जति सक्दो शुभ बनाउने प्रयास गर्ने गर्दछन । यहाँ पनि हामी […]
भान्छामा यी ६ चिज भुलेर पनि नराख्नुहोस्, स्वास्थ्यका लागि घातक साबित हुनसक्छ
मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण पार्ट भान्छा ९किचन० पनि हो । भान्छामा खानेकुरा राखिन्छ र पकाइन्छ तर कहिलेकाँही अन्जानमा कयौँ यस्ता पनि राखिन्छ जो स्वास्थ्यका लागि खतरनाक सावित हुनसक्छ । जान्नुस् के हो त्यस्तो बस्तु […]
पहिलो भेटमा महिलाको के हेर्छन् पुरूषहरु, जसले गर्दा महिला आकर्षित हुन्छन
महिलाप्रति पुरूषको आकर्षण स्वभाविक हो । महिलालाई पहिलो हेराई पुरूषले उनको अनुहार भन्दा पनि महिलाको स्तनमा पहिले ध्यान जाने विभीन्न अध्ययनले पुष्टी गरिसकेको छ । यस्तै, भर्खरै युनिभर्सिटी अफ वेस्टमिनिमस्टरले गरेको अनुसन्धानका क्रममा पनि यसको […]
धुरु धुरु रूदै यसरी पोखिन् पिडा,घाँटी न्याक्ने देखि मारिदिन्छु सम्मको यातना (भिडियो सहित)
भारतको बाटो हुँदै खाडी मुलुकमा बेचिएकी झापा कि एक नेपाली चेली रेखा ताजपुरिया को उद्दार गरि नेपाल ल्याइएको छ । नेपाल प्रहरिका एक डिएसपीले नै आफ्नो मोटरसाइकल मा राखेर नेपालको सिमाना कटाइ भारत पुर्याएको र […]
एक्छिन् सम्म ऐया ऐया भनेकि श्रेया अबअझै अझै भन्न थालि
मैले ढोका लगाए।उ डराएकि जस्ति थि मैले उस्लै हौस्याए र गालामा चुमे।मैले बिस्तारैअफ्नो हात उस्को कांधमा राखे। उ तल हेरिरहेकि थि। मैले उस्को चिउडोमा समातेर उठाए र ओठ चुम्न लागे।बिस्तारै मैले आफुलाइ सजिलो बनाउदै मेरो […]
तनावपूर्ण र असन्तुलित जीवनशैलीले मानिसको मस्तिष्कमा नकरात्मक प्रभाव पार्नुका साथै शारीरिक स्वास्थ्य पनि बिगारिरहेको हुन्छ । पुरुषहरु केही कुरामा अभ्यस्त हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरुको शुक्रकिट उत्पादनमा नकरात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । यदि तपाई सुतेर टिभी […]
श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन अनेक उपाय अपनाइन्छन् । विश्वका अधिकांश देशमा पुरुष मानसिकता नै हाबी देखिन्छ । दम्पत्ती बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउदा दुवैले धेरै विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि श्रीमतीले अझ बढी […]
सेक्स गर्दा गर्भ रहिहाले कसरी त्यसको समाधान गर्ने ? जानी राखौ
म २२ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ। केही दिनअघि एक जना केटासाथीसँग मेरो यौनसम्पर्क भयो। जब ऊसँग सम्पर्क भयो त्यो दिनदेखि मेरो तल्लो पेट एकदम दुखिरहेको छ। यस्तो किन भएको होला ? हामीले कुनै साधन पनि […]
यिनै हुन आफ्नो योनाङ्ग परिवर्तन गर्ने ब्यक्ती – हेर्नुस भिडियो
मान्छेले जन्म कित महिला कित पुरुष भएर लिन्छ । मानिसले नचाहादा नचाहादै पनि आफुलाई चाहिएको सन्तान नपाउन सक्छन । पहिले पहिले मनिसहरु प्राय जसो घरमा एउटा छोरा नजन्मिउनजेल सम्म सन्तान जन्माउने गर्थिए । तर अहिले […]